Madasha Xisbiyada oo sheegay in dowladda ay ku fashilantay qabashada doorasho Qof iyo Cod ah – Kalfadhi
Madasha Xisbiyada oo sheegay in dowladda ay ku fashilantay qabashada doorasho Qof iyo Cod ah
Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya oo maanta soo saaray war-saxaafadeed ayaa ku eedeeyay dowladda federalka inay ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod ah, waxaana ay ku baaqeen shir-weyne deg-deg ah.
Waxaa ay Baarlamaanka ugu baaqeen in uusan ansixin dhammaan qodobaddii uu soo saaray Guddiga, iyagoona ku sababeeyay in dalka iyo deegaannadaba u horseedeysa qalalaase iyo deganaansho la’aan ay xalintiisa adkaato muddo dheer.
Kuraasta gobolada Waqooyi iyo qaabka loo dooranayo waa in lagu heshiiyo ee aysan cid gaar ah go’aan ka gaari karin, ayey yiraahdeen madashada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa furitaankii Baarlmaanka ee bishan ka sheegay in dalka Soomaaliya ay ka dhici doonto qoorasho qof iyo cod ah, taas oo fursad u siineysa shacabka Soomaaliyeed in ay doortaan xisbiga ay doonayaan.
Halkan hoose ka aqriso war saxaafadeedka ay soo saareen Madasha Xisbiyada Qaran;
Xisbiga Wadajir “Xeerka Asteynta iyo Daadajinta kuraaska Baaramaanka waxaa ka muuqda diidmo federaalka ah”